Maxamed Saalax oo Sanadkii labaad xariira ku Guuleystay Abaalmarinta Laacibka Qaarada Afrika..+SAWIRRO – Gool FM
Maxamed Saalax oo Sanadkii labaad xariira ku Guuleystay Abaalmarinta Laacibka Qaarada Afrika..+SAWIRRO
( Dakar ) 09 Jan 2019. Dhaliyaha Liverpool Mohamed Salah ayaa loo caleemo saaray sanadkii labaad oo xariira laacibka qaarada afrika kaddib 12-bilood kahor oo abaalmarintan hore ugu guuleystay.
Wuxuu sido kale dhaliyay laba gool koobkii adduub ka oo ay markii u horreysay cayaareen Egypt tartankaa muddo 28-sano kaddib.
Salah ayaa abaalmarintan ku garaacay musharaxiinta kala ah, xiddiga Liverpool ay kawada mid yihiin Sadio Mane iyo weeraryahanka Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang.
Waa isla cayaariyahanadii uu sanadkii tagay kaga adkaatay jaa’izadan oo ay codeeyaan agaasimayaasha farsamada iyo 56 tababarayaal xubin ka ah CAF.
Markale ayuu dhameystiray ku guuleysiga abaalmarinta sanad laha kaddib markii uu 26-jirkaan hore ugu guuleystay laacibka BBC ee qaarada Afrika ugu wanaagsan sido kalena uu sanadkan ku dhameystay kaalinta lixaad ee Ballon d’Or.
HORDHAC: Manchester City v Burton Albion, Difaacayaasha tartanka oo Kulan Sahlan la Balansan kooxda ka socota Horyaalka Seddaxaad